China Cantaloupe vagadziri uye vanotengesa | Heritage
Hami nyowani nyowani inobva kudunhu reXinjiang ine chigadzirwa cheGeographical Indication.
Cantaloupe inotapira uye ine hutano.
Chikafu cheMagariro chinogadzira iyo yakaomeswa cantaloupe ine mhando yepamusoro michero mitsva nekutonhora inotonhorera mune yakaderera-tembiricha manyuchi, simbisa iyo acidity uye yakakosha inonhuwirira uye yakasarudzika flavour.
Cantaloupe yakaomeswa idyo ine hutano ine hupfumi mu antioxidants, mavitamini, uye zvicherwa. Iyo antioxidants iri mukushandira kweakaomeswa cantaloupe inobatsira muviri kudzikisira mahara radicals ayo anogona kukuvadza maseru ane hutano.
Cantaloupe vise inogadzira chikafu chinozorodza muzhizha, uye ine michero inogona kubatsira hutano hwemunhu.
Yakakurumbira nevana nevakuru, cantaloupe inogona kugadzira dhizeti inozorodza, ine hutano, uye yakapusa yezhizha, nepo yavo yemvura yakakwira ichibatsira kudzivirira kupera mvura mumuviri.
Rudzi urwu rwezvibereko zvakare rine akasiyana mavitamini, zvicherwa, uye antioxidants.
Mamwe mazita ecantaloupe anosanganisira muskmelon, mush melon, rock melon, uye Persian melon. Ivo inhengo yemhuri yeCucurbitaceae, pamwe nehuswa mavise, manwiwa, uye magaka.
Mvura, antioxidants, mavitamini, uye zvicherwa mu cantaloupe zvinogona kupa akasiyana marapiro ehutano.
Antioxidants, semuenzaniso, inogona kubatsira kudzivirira kukuvara kwesero uko kunogona kukonzeresa kugomarara uye mamwe mamiriro ehutano.
Munguva yemetabolism, muviri unoburitsa mamorekuru asina kugadzikana anonzi mahara radicals, ayo anogona kuunganidza mumuviri nekukuvadza maseru. Uku kukuvara kunozivikanwa se oxidative kusagadzikana. Antioxidants anobatsira kubvisa mahara radical kubva mumuviri uye kudzivirira oxidative kusagadzikana.
Yakanyanya-Kutengesa China Yakaomeswa Cantaloupe, Mvura isina mvura yeCantaloupe, Tinokudza pachedu sekambani inoumbwa nechikwata chakasimba chevashandi vane hunyanzvi uye vane ruzivo mukutengeserana kwepasi rese, kusimudzira bhizinesi uye kusimudzira chigadzirwa. Zvakare, kambani inogara yakasarudzika pakati pevakwikwidzi vayo nekuda kwehunhu hwayo hwepamusoro mukugadzirwa, uye kugona kwayo uye kushanduka mukutsigira bhizinesi.
"Kubva pamusika wepamba uye kuwedzera bhizinesi rekune dzimwe nyika" ndiyo yedu nzira yekuvandudza yeYakanakisa-Kutengesa China Yakanyanya Mutengo Tropical Zvibereko Snack Yakaomeswa Cantaloupe Slice, Isu tanga tiri takatarisira kumberi kumisikidza kwenguva refu-diki emabhizimusi mapato newe.
Zvadaro: Mandarin Orange
Mvura isina mvura yeCantaloupe